Foreign Affairs Ministry summons Malaysian Ambassador over Najib’s irresponsible remarks – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Minister of State for Foreign Affairs U Kyaw Tin summoned Malaysian Ambassador H.E. Mohd. Haniff Bin Abd Rahman yesterday afternoon, and expressed his dismay that the Malaysian Prime Minister Najib bin Tun Razak ledapublic rally in Kula Lumpur on 4th December and made strong remarks against the Government ofafellow ASEAN member state citing unverified and unsubstantiated allegations.
The Minister of State also categorically rejected the accusations of “ethnic cleansing” and “genocide” which were far from the realities on the ground. Such irresponsible remarks could worsen the already deepening polarization between the two communities and incite violent extremism.
The Malaysian Ambassador was also informed of Myanmar’s desire to maintain and strengthen friendly relations with ASEAN family members and of the need not to be misled by the disinformation campaigns waged by certain groups with ulterior motives against Myanmar. The Minister of State also stressed the importance of upholding ASEAN spirit of friendship and cooperation as well as the principle of peaceful resolution of disputes between member states through dialogue, consultation and negotiation.
The Malaysian Ambassador was also informed of the strenuous efforts taken by the Government of Myanmar to resolve the issues in Rakhine State, including the establishment of the Advisory Commission led by Dr. Kofi Annan andanational level Investigation Commission. The Minister of State also stressed the need for the international community to assist Myanmar in its efforts to maintain peace, stability and security of the people and to make progress in building better relations between the two communities, instead of making calls based on unverified allegations that will only cause bigger problems than solutions. The Ambassador was also informed that any action that could radicalize extremist movements would endanger not only ASEAN unity but also regional peace and stability. On its part, Myanmar will continue to strive to achieve harmony, peace and prosperity among all ASEAN member states and beyond.
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mohd. Haniff Bin Abd Rahman အား ယမန်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဆင့်ခေါ်၍ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ရာဇက်အနေဖြင့် ကွာလာလမ်ပူမြို့၌ လူထုဆန္ဒပြပွဲတစ်ရပ်ကို ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အခြေအမြစ်မရှိသည့် သတင်းများအပေါ်အခြေခံလျက် အာဆီယံမိသားစု၀င်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အစိုးရတစ်ရပ်အပေါ် ပြင်းထန်စွာစွပ်စွဲ‌ပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် များစွာအံသြ စိတ်ပျက်မိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယဝန်ကြီးက“လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု”၊ “လူမျိုးစုသုတ်သင်ရှင်းလင်းမှု” စသည့် မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲချက်များကိုလည်း ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ယင်းကဲ့သို့ စွပ်စွဲချက်များသည် မြေပြင်ပေါ်ရှိ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လုံးဝကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းနှင့် ထိုသို့ တာ၀န်မဲ့ပြောကြားမှုက လူ့အသိုက် အဝန်းနှစ်ခုအကြား ကွဲပြားမှုများကို ပိုမိုကြီးမားလာစေနိုင်ပြီး အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုနှိုးဆွပေးသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေ နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မလေးရှားသံအမတ်ကြီးအား မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံအဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးသည့် ဆက်ဆံမှုများကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း မြှင့်တင်သွားလိုသည့် သဘောဆန္ဒကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အဖွဲ့အစည်းအချို့မှ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ထိုးနှက်ဆောင်ရွက်နေသည့် မဟုတ်မမှန်သတင်းများဖြင့် ဝါဒဖြန့်မှုများကြောင့် နားလည်မှု လွဲမှားခြင်းမျိုး မဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများအကြား ပဋိပက္ခ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအလေးထား၍ ငြိမ်းချမ်းစွာညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းသည့်မူကို စောင့်ထိန်းရန် အရေးကြီးကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ၀န်ကြီးမှ ရခိုင်ဒေသအရေးကိစ္စအား ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ဒေါက်တာ ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်နှင့် အမျိုးသားအဆင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တို့ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေမှုများအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အားသွန် ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် ရခိုင်ဒေသလုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး၊ လူ့အသိုက်အဝန်းနှစ်ခုအကြား ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးကို တည်ထောင်နိုင်ရေးတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ အခြေအမြစ်မရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေပြု၍ ပြဿနာအား ဖြေရှင်းရေး ထက် ပိုမိုကြီးထွားမှုကိုသာ ဖြစ်စေနိုင်သည့် ဝေဖန်ပြောကြားမှုများကို ရှောင်ရှားသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ၀န်ကြီးမှဆက်လက်၍ အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဆောင်ရွက်ချက်မှန်သမျှသည် အာဆီယံ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို သာမက ဒေသတွင်းအေးချမ်းတည်ငြိမ် ရေးကိုလည်း ထိပါးနိုင်စေကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံဒေသတွင်း၌သာမက ဒေသပြင်ပတွင်ပါ ညီညွတ်ရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်